२७ वाणिज्य बैंकहरुमा कुन सबैभन्दा तगडा ? हेर्नुहोस् तथ्यांक
काठमाडौं : हाल सञ्चालनमा रहेका २७ वटै वाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश बैंकको प्रमुख सूचकहरुमा आकर्षक वृद्धि भएको छ । चुक्ता पुँजीमा ग्लोबल आइएमई बैंकको अग्रता छ । ३ वटा बैंकको खुद नाफा ३ अर्ब माथि पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी हुनेमा एनआइसी एसिया बैंक परेको छ ।
अधिकांश बैंकले खुद नाफा वृद्धि गरेका छन् । वितरणयोग्य नाफा पनि धेरैको वृद्धि भएको छ । इपीएस, रिजर्भ लगायत अन्य महत्वपूर्ण सूचकहरुमा पनि बैंकहरुले प्रगति गरेका छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरुले निकै सकारात्मक सन्देश दिएका छन् । यो पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरुका लागि पनि खुशीको खबर हो । पुँजी वृद्धि अनुपातमा बैंकहरुले नाफा र लाभांश बाँड्न सक्ने क्षमतामा सुधार गर्दै गएको देखिन्छ ।
नाफा, रिजर्भ, वितरणयोग्य नाफा लगायतका सूचकको तुलना गर्दा विशेषगरी चुक्ता पुँजीलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै पुँजी भएका बैंकको नाफा बढी हुनु स्वभाविक हुन सक्छ । यसआधारमा प्रतिसेयर आम्दानीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । साथमा, प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ । अब हेरौं, कुन बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो :
चुक्ता पुँजीमा ग्लोबल आइएमई बैंकको सबैभन्दा धेरै
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी ग्लोबल आइएमई बैंकको रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको चुक्ता पुँजी १४% ले बढेर २१ अर्ब ६३ करोड २५ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा सबै बैंकको चुक्ता पुँजी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी बढ्नेमा मेगा बैंक रहेको छ । गण्डकी विकास बैंकलाई यसै वर्ष गाभेकाले यसको चुक्ता पुँजी धेरै बढेको हो । यसको पुँजी ४१.०६% ले बढेको छ ।
जगेडा कोषमा नेपाल बैंक सबैभन्दा अघि
२७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष नेपाल बैंकको रहेको छ । नेपाल बैंकको जगेडा कोष १८.७९% ले बढेर १६ अर्ब ८४ करोड ५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसअवधिमा १५ बैंकको जगेडा कोष बढेको छ । सबैभन्दा धेरै जगेडा कोष बढ्नेमा लक्ष्मी बैंक रहेको छ । यसको जगेडा कोष ७०.२९% ले बढेर ४ अर्ब ८ करोड ९६ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १२ बैंकको जगेडा कोष भने गत वर्षको भन्दा घटेको छ ।
खुद ब्याज आम्दानीमा ग्लोबल आइएमई बैंकको अग्रता
चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी ग्लोबल आइएमई बैंकले कमाएको छ । यसअवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १४.४३% ले बढेर ६ अर्ब ८७ करोड २ लाख १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा १३ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै खुद ब्याज आम्दानी बढ्नेमा कुमारी बैंक रहेको छ । कुमारी बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३९.०४% ले बढेर ३ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख १७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । १४ बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने गत वर्षको भन्दा घटेको छ ।
नाफामा नबिलको अग्रता, ३ बैंकको नाफा ३ अर्ब माथि
चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा नबिल बैंक रहेको छ । यसको नाफा १६.५०% ले बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यता, ग्लोबल आइएमई र एनआइसी एसिया बैंकको नाफा पनि ३ अर्ब माथि छ । यसअवधिमा २१ बैंकको नाफा बढेको छ भने ६ बैंकको नाफा घटेको छ । सबैभन्दा धेरै नाफा बढ्नेमा एनएमबि बैंक रहेको छ । यसको नाफा ८७.८०% ले बढेर २ अर्ब ५१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
वितरणयोग्य नाफा कसको धेरै ?
चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै वितरणयोग्य नाफा नबिल बैंकको रहेको छ । नबिलको वितरणयोग्य नाफा ८१.४७% ले बढेर ३ अर्ब ८० कोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षको अवधिमा २५ बैंकको वितरणयोग्य नाफा बढेको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र सिद्धार्थ बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने घटेको छ ।
प्रतिसेयर आम्दानीमा को अघि ?
चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी नबिल बैंकको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ३६ रुपैयाँ ६३ पैसा रहेको छ । २७ बैंक मध्ये १६ बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढेको छ । सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी बढाउनेमा नेपाल बंगलादेश बैंक रहेको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ २८ पैसाले बढेर २४ रुपैयाँ १७ पैसा पुगेको छ । १० बैंकको भने प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेप्सेमा सूचीकृत नभएकाले प्रतिसेयर आम्दानी वित्तीय विवरणमा उल्लेख छैन ।